DC गियर मोटर बिक्री को लागी, उच्च टोक़ गियर dc मोटर
सानो DC गियर मोटर
DC गियर मोटर 100 rpm
DC गियर मोटर 24v
एन्कोडरको साथ डीसी गियर मोटर
वित्त र बैंकिंग
वर्म डीसी गियर मोटर
परामर्श गर्न आवश्यक छ?
म कहाँ सन्दर्भ उत्पादनहरू लिन सक्छु?
तपाइँको DC गियर मोटर्सको गुणस्तर कस्तो छ?
कसरी सही DC गियर मोटर चयन गर्ने?
कसरी तपाइँको एजेन्ट बन्ने?
तपाईंको व्यवसायको बारेमा परामर्श गर्न आवश्यक छ?
Sogears विनिर्माण र ईन्जिनियरिंग 1993 देखि संचालनमा रहेको छ, लामो समयसम्म चल्ने उच्च टोक़ गियर डीसी मोटरको डिजाईन र निर्माण। कुनै पनि उद्योगको लागि उच्च प्रदर्शन। गुणवत्ता सुनिश्चित।
हामीसँग विदेशी उन्नत टेक्नोलोजी, उन्नत उपकरण, पेशेवर व्यवस्थापन टोली र प्रक्रिया पूरा गर्ने को अनुभव छ, तर iso9001 / ts16949 नियमन उत्पादनको कडाईको बमोजिम, प्रत्येक उत्पादित उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै।
निजी कम्पनीहरूमा मैले कहाँ जानकारी पाउन सक्छु?
जबकि "उचित मूल्य, शीघ्र वितरण समय" ग्राहकहरु बीच एक राम्रो प्रतिष्ठा स्थापना गर्न, कम्पनी आपूर्ति र मांग को बीच एक ठोस सम्बन्ध स्थापित गर्न कम्पनी को धेरै घरेलू उत्पादकहरु र निर्माता छन्। जबकि कम्पनीको 90% उत्पादन संयुक्त राज्य, जर्मनी, जापान, इटली, मलेशिया, अस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व र अन्य देशहरू र क्षेत्रहरूमा निर्यात हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले प्रशंसा गरे। त्यसोभए, यदि तपाईं हामीलाई सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको देशमा हाम्रा ग्राहकहरू तपाईंको सन्दर्भको लागि तपाईंलाई केही नमूना पठाउन व्यवस्थित गर्न सक्छौं वा हामी तपाईंलाई सिधै पठाउन सक्दछौं।
प्रोजेक्ट टीम कति ठूलो छ?
हाम्रो उच्च गुणवत्ता उत्पादन प्रणाली अयोग्य प्रदर्शनको एक आश्वासन हो। हाम्रो कम्पनीले गुणस्तरको व्यवस्थापन उद्देश्यलाई पहिलो बनाउँदछ, प्रतिष्ठा सुप्रीम। हाम्रो उच्च टोक़ गियर डीसी मोटर दुवै इनडोर र आउटडोर प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ। उनीहरूसँग शान्त आपरेशन, कम कम्पन डिजाइन, र कम्प्याक्ट आयामहरू छन्, उनीहरूले अपेक्षाहरू भन्दा परे प्रदर्शन गर्छन्। यी पक्षहरू तिनीहरूको बहुउद्देश्य विकल्पहरूको साथ मात्र बढाइएको छ।
कसरी एक सही डीसी गियर मोटर छनौट गर्ने?
1। तपाइँको आवेदन आवश्यकताहरु जान्नुहोस्।
डीसी गियर मोटर छनौट गर्न पहिलो चरणले तपाईंको अनुप्रयोग आवश्यकताहरूको समीक्षा गर्दैछ। यसले समावेश गर्दछ तर निम्नमा सीमित छैन:
सामान्य आवश्यकताहरू: खाम आकार, माउन्टिंग अभिमुखिकरण, माउन्टिंग प्रकार र आकार, ओभरहंग र साइड लोड, र स्नेहन प्रकार।
इनपुट शक्ति स्रोत: भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी (हर्ट्ज), अधिकतम हाल (Amps) र नियन्त्रण प्रकार, यदि लागू भएमा।
गियरमोटर विनिर्देशहरू: आकार, तौल, इच्छित आवाज स्तर, जीवन प्रत्याशा र मर्मत स्तर।
गियरमोटर प्रदर्शन: गति, टोक़, ड्यूटी चक्र, हार्सपावर, टार्क सुरूवात र चालु (पूरा लोड)।
अपरेसन वातावरण: ईन्कोडरको साथ डीसी गियर मोटर, अनुप्रयोग र परिवेशको तापमान, र ईन्ग्रेस सुरक्षा (आईपी) रेटिंग।
2। उचित डीसी गियर मोटर चयन गर्नुहोस्।
अर्को, तपाईको अनुप्रयोग आवश्यकताहरूको सूची प्रयोग गर्नुहोस् र उनीहरूसँग मोल स्पेसिफिकेसनको तुलना गर्नुहोस् भिन्न प्रकारका तपाईले रुचि राख्नु भएको जस्तो सार्वभौमिक, ब्रशलेस वा स्थायी चुम्बक गियरमोटरको रूपमा। किनकि प्रत्येक अनुप्रयोगको आफ्नै विशिष्ट विशेषताहरू र आवश्यकताहरू छन्, त्यसमा ध्यान दिनुहोस् कि कुन अनुप्रयोग जस्तै हार्सपावर, टार्क सुरू गर्न वा दक्षता तपाईको अनुप्रयोगको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यस चरणको बखत, तपाईं यो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि गीयरबक्स र मोटर छुट्टिनु भएको मिलापले तपाईंको आवश्यकतालाई सबै भन्दा राम्रो गर्दछ।
3। चालित गर्न लोडको गतिको र टोकरी आवश्यकताहरू जान्नुहोस्।
तपाइँको गियरमोटर तपाइँको इच्छित अनुप्रयोगको लागि उचित आकारको छ भनेर सुनिश्चित गर्न तपाइँको आउटपुट गति जान्नु महत्त्वपूर्ण छ, उदाहरणका लागि डीसी गियर मोटर 100 आरपीएम, सुरु र टोकरी चल्दै। उचित गियरमोटर छान्नु भनेको मिल्दो आउटपुट स्पीड (RPM) र तपाईंको अनुप्रयोगको आवश्यकतालाई टोक़को कुरा हो। आउटपुट गति तपाइँको मेशिनको आवश्यकताहरु द्वारा निर्धारित गरीएको छ र पहिल्यै ज्ञात हुनुपर्दछ। यसले सुरु र दौड टोर्क निर्धारण गर्न छोड्छ। दिमागमा राख्नुहोस्, जब तपाइँ प्रि-इञ्जिनियर गरिएको गियरमोटर छनौट गर्नुहुन्छ, निर्माताले मोटर र गियरबक्स निर्बाध कार्य गर्दछ भन्ने सुनिश्चित गर्न धेरै भारी लिफ्टि done गरेको छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो सुरूवात र चल्दो टोक़ गणना गर्नुभयो भने, तपाईंको आवश्यकताहरूसँग मेल खाने एक मोटर फेला पार्न टोक़, गति र दक्षताको लागि निर्माताको प्रदर्शन कर्भ प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसोभए संभावित डिजाइन सीमितताहरू समीक्षा गर्नुहोस् जुन चालु (पूरा लोड) गियरबक्स टोक़, इनपुट गति, गियरबक्स उपज शक्ति, थर्मल सुविधाहरू र शुल्क चक्रहरू समावेश गर्दछ।
एकचोटि तपाईंले गियरमोटर छनौट गर्नुभयो, यो ठिक अपरेटिंग वातावरणमा मोटर राम्रोसँग चल्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न धेरै परीक्षणहरू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि मोटर अव्यावसायिक रूपमा तातो हुन्छ, धेरै हल्ला हो, वा तनाव देखा पर्दछ, मोटर चयन प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस् वा निर्मातालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाइँको गियरमोटरलाई ठीकसँग आकार दिन समय लिँदा यो निश्चित हुनेछ कि यसले वर्षौंसम्म चलेको छ र शिखर क्षमतामा अपरेट गर्दछ।
म इकॉनोमिस्ट कहाँ पाउन सक्छु?
कृपया तपाइँको सबै जानकारी हाम्रो ईमेलमा पठाउनुहोस् [ईमेल सुरक्षित] र यो हाम्रो प्रबन्धनमा स्थान्तरण हुनेछ। उनीहरूले तपाईको प्रतिक्रियालाई हेर्ने छन् र दिने छन। तब, हामीसँग भेट्न अगाडि बढ्नको लागि भेट्नु पर्ने हुन सक्छ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईंको पहिलो पाउनुहोस्